Afewerki oo gaaray Addis Ababa - BBC News Somali
Afewerki oo gaaray Addis Ababa
Image caption Afewerki waxaa garoonka dayaaradaha ku soo dhoweeyey Abiy Axmed
Madaxweynaha Eritrea Isias Afewerki ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya markii ugu horraysay muddo ka badan 20 sano. Booqshadiisa ayaa jawaab u ah tii uu todobaadkii hore Eritrea ku tegey ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dal ayaa go'naa tan iyo wakhtigaas, waxaana sidoo kale kala irdhoobay qoysas wada dhashay ama xidid ahaa.
Ra'isal wasaaraha Itoobiya oo Asmara gaadhay
Tan iyo markii uu dhowr bilood xukunka qabtay ra'iisul wasaare Abiy Axmed, Itoobiya waxaa ka socday isbeddello siyaasadeed iyo kuwo milateri, wuxuuna sidoo kale isku dayayey inuu dib u hagaajiyo xiriirka uu dalkiisu la leeyahay waddamada gobolka.
Ilaa xilligii uu Abiy Axmed ra'iisul wasaare Itoobiya ka noqday wuxuu billaabay isbaddalo cusub.
Image caption Afewerki oo salaan ka qaadanaya ciidanka Itoobiya
Image caption Labada hogaamiye waxay dabciyeen mowqifkii adkaa ee ay kala taagnaayeen
Lahaanshaha sawirka Mela Gebre Medhin
Image caption Shacabka Eritrea oo soo dhaweeyay Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo booqasho dhawaan ku tagey dalkaasi
Image caption Weriye Cabislam Hadigu wuxuu ku rajo wayn yahay inuu arko gabadhiisa oo 16 sanno ka hor ugu war dambaysay sii uu uga faa'idaysto isbaddallada